Ihe Mgbakwunye Akụrụngwa VITEC na-enye ndị na-agbasa ozi ohere ịgbanye Broadcast Ogo HD / SD video | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Igwe ngwaike kọlụm VITEC na-enye ndị mgbasa ozi ohere ịgbasa Broadcast Quality HD / SD video
Usoro ihe ọ bụla a na-ahụ anya nke onye mgbasa ozi mepụtara bụ ihe nnọchianya nke ika ha na olu ha n’azụ. Ọdịnaya ahụ kwesịrị ịdị mma ma na ọ gha nwee ọtụtụ uru mara mma maka ihe ọ bụla. Agbanyeghị, iji mee nke ahụ, onye na-agbasa ozi chọrọ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji gosipụta ọdịnaya ha ka mma wee nweta ndị na-ege ntị buru ibu. Onye kachasị mma mgbasa ozi nwere ike ịnwe onwe ha, mgbe ahụ mmetụta ndị ọzọ ọdịnaya ha ga-enwe, yana ụlọ ọrụ dịka VITEC nwere ike inyere ha aka MGW Ace encoder.
Ebe ọ bụ na 1988, VITEC abụwo onye ndu zuru ụwa ọnụ n'ihe banyere usoro ntinye vidiyo na-akwụsị na njedebe. Kemgbe ihe karịrị iri afọ atọ, ụlọ ọrụ ahụ abụrụla onye na-eweta mgbasa ozi, agha na gọọmentị, ụlọ ọrụ, egwuregwu na ebe ntụrụndụ, na ụlọ ofufe. VITEC Onyinye H.265 (HEVC) na H.264 kacha buo ibu n’ahịa n’eji ngwa na idozi ihe. IPTV ngwọta maka desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka, na kaadị PCI na SDK maka mmekọrịta ọrụ. VITEC enwere ike ịhazi ngwọta vidiyo dijitalụ nwere ike ịhazi mkpa ahịa ọ bụla. Ha na-enyefe teknụzụ dị mfe iji rụọ ọrụ nke na -ekwu oke mma, adịghị ala HD vidiyo, na-ejide ihe omume na -elere edekọ na ndekọ maka nkesa nke enweghị nkwado n'ọtụtụ usoro n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla, na ngwaọrụ ọ bụla. Ha Igwekota ngwanrọ HEVC & H.264, MGW Ace abụghị ihe dị iche.
VITEC'MGW Ace Ihe Mgbakwunye Ngul
VITEC's MGW Ace bu ihe ntinye ogugu mbu nke H.265 / H.264 nke mbu n’uwa ihe nlere-di, ndi ukwu di ukwu, ngwa agha erudoro. Ihe ntinye ederede a nwere ezigbo mgbakwunye ngwanrọ HEVC 100%, nke na-enyere ndị ọrụ aka ịgbanye vidiyo akpọrọ 1080p vidiyo nke nwere ọnụọgụ bandwidth ruru 50% ma ọ bụrụ na atụnyere ụkpụrụ H.264 dị ugbu a. Na MGW Ace kwadoro VITEC Koodu ntinye aka HEVC GEN2, yana codec na - akwado Ultra-Low Latency (ULL) na - agbanye na HEVC maka iko-to-iko ruo ala 65ms.
MGW Ace nyere ndị ọrụ aka ịrụ ọrụ nke ọma karịa na-ebuga ụdị kachasị mma IPTV mmiri iyi satellite njikọ, njikọ nke onwe, na ịntanetị. Mmụba a nwere mmụba sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi dị n'ọhịa, ntinye aka gaa n'ọzọ HD vidio, ntanetị sitere na, ma ọ bụ n'etiti egwuregwu iji kesaa ihe osise agha dị oke egwu.
The MGW Ace encoder na-enyekwa ezigbo vidiyo HEVC kachasị mma ruo 4: 2: 2 10-bit na ntinye laodetị ruo 10ms na ULL maka ọmarịcha 65ms na iko latency. Ọ na - egosipụtakwa ike dị ala ma e jiri ya tụnyere ihe nzuzo HEVC nke ngwanrọ na - arụ ọrụ na sava ọtụtụ CPU. Na MGW Ace encoder na-eme ka o kwe omume itinye mkpụrụ ndụ HEVC na-esote gafere ọnụ ụlọ ihe nkesa ma banye n'ọhịa maka ngwa Mgbasa Ozi na ntinye dị mfe na ikpe njem, gwongworo TV, obere okwu, ụgbọ ala, na ụgbọ elu.
The MGW Ace encoder bụ usoro nchekwa data HEVC ISRC nke mbụ na-eweta ihe nchekwa ụwa niile iji nweta asambodo JITC, nke na-ebute mbugharị IP iyi HEVC MISB. Ihe ntinye akwukwo a nwekwara otutu ihe omuma nke metaraata KLV / STANAG, nke na-enyere ndi ochichi na ndi agha aka belata mmeputa bandwidth network ka ha na –emeputa ogo vidiyo di elu maka onodu obula banyere onodu obula (SA) ma obu ọgụgụ isi, onyunyo na ncheghari (ISR).
Ọtụtụ ngwa nke MGW Encoder gụnyere:
Satellite Ozi Nchikota na Ubi Mgbasa Ozi
Onyinye Latitude Point-to-Point dị ntakịrị karịa na netwọkụ ọ bụla
N'ime imepụta / Na Ntanetị ụlọ (REMI) n'elu njikọ nnyefe ma ọ bụ ntanetị
Ihe onyonyo onodu onodu ya na ihe obula FMV gabigara LANs na WAN
Nzuzo Nchebe na Nyocha (ISR) site na ala na ụgbọ ala
Full HD Nlele 1080p na Iwu na Njikwa
Ntinye na High-Res HDMI / Isi mmalite komputa / DVI / Kọmputa
Sharingkesa elele ihuenyo PC n’elu IP n’etiti ndị ọrụ ime obodo na n’ime ime obodo
Stkwanye Vidio Motion zuru ezu na Desktọpụ, TV na Ekwentị Ngwaọrụ n'elu ọkpọkọ nwere mmachi
Maka inweta nkọwa ndi ozo banyere MGW Ace Encoder, gaa na www.vitec.com / ngwaahịa / MGW-Ace.
Ihe Mere Họrọ: VITEC
Ọ bụrụ na ọkachamara na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ezigbo ọdịnaya nke ha chọrọ ikesara, gaa n'ihu VITEC bụ n'ezie onye na-akọ nkọ. N'ime iri afọ atọ sochiri mmalite ya, VITEC abụrụla ọsụ ụzọ na nrụpụta na imepụta ngwaike na ngwanrọ maka ntinye vidiyo, ederede, transcoding, na ntughari, ntụgharị, na-edebe ihe na ntanye na IP. Guzo dika ihe nlere, VITEC enweela ihe ịga nke ọma dị ka ụlọ ọrụ mbụ na-eweta teknụzụ mkpakọ HEVC na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa nwere ngwa nkwanye ọkụ. Typedị okike a bụ ụdị ndị mgbasa ozi chọrọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ iwere akara ha na ọdịnaya ahụ na-agbasawanye ya na ndị na-ege ntị buru ibu.
Maka ozi ọzọ banyere VITEC, gaa na www.vitec.na .com / ulo.
Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi Mgbasa ozi Kọmpat nchekwa Ihe nchekwa HEVC & H.264 Onyinye ngbanye vidiyo nkwụsị nghazi ngwanrọ H.265 / H.264 mbu Graham Chapman Prmoted toEditor Teknụzụ mkpakọ HEVC Ogo vidiyo HEVC mwekota IPTV ngwọta isovideo, viarte, HDR, mkpọtụ mkpọtụ, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate Reduction, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw MGW Ace SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ Ultra HD Forum Ngosi Injinia ọdịnaya anya Vitec 2020-05-04
Previous: CP Nkwukọrịta Integrates Studio dị iche iche na ime ụlọ maka IRONMAN®
Osote: Anyi -Amalite Mmeghe LiveLab Na Panasonic